Ny rindranasa dimy tsara indrindra ho an'ny Android TV | Androidsis
Android TV dia efa an-tsena nandritra ny roa taona izao. Manangana tsikelikely ny tenany ho toy ny lampihazo izy ary hitantsika ny fomba fanatsarana ny fanatsarana rehefa mandeha ny fotoana. Fanampin'izay, misy lalao sy fampiharana betsaka kokoa misy ankehitriny noho ny hatramin'izay. Noho izany, eto ambany izahay manome anao compilation miaraka amin'ireo sasany amin'ireo rindranasa hitanay fa misy.
Amin'izany fomba izany Raha manana TV Android ianao dia afaka mahazo bebe kokoa amin'izany amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo rindranasa ireo. Safidy tsara hodinihina izy ireo, indrindra satria mamela antsika hanome ny fahaizan'ny fahitalavitra amin'ny fomba tena tsotra.
Ny fampiharana rehetra misy sy mifanaraka amin'ny Android TV. Ka tsy hanana olana ianao amin'ny fampidinana azy ireo amin'ny maodelinao ary hahafahanao mampiasa azy ireo. Hanampy anao hampiasa fahita lavitra amin'ny fahita lavitra izy ireo, misy aza ny safidy mijery fantsona karama maimaim-poana amin'ny fahitalavitra.
5 Mifohaza Lan
Mety misy ny maodely izay efa apetrakao ao anaty toerana misy anao, saingy iray amin'ireo rindranasa ireo izay tsy afaka manatrika. Satria raha misy sehatra manome atiny be dia be antsika dia i Netflix izany. Ny orinasa dia mamokatra andiany maro be avy aminy, amin'ny karazany rehetra ary amin'ny firenena maro sy maro. Ka afaka mankafy atiny be dia be izay hahaliana antsika tokoa. Ary koa, manana sarimihetsika sy andian-tantara maro izay fantatray izahay fa misy. Ka tsy ho mankaleo amin'ny fotoana rehetra isika amin'ity karazana atiny ity.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity fampiharana ity amin'ny Android TV. Na dia tsy maintsy mandoa famandrihana amin'ny sehatra aza izahay. Fantatrao fa manana drafitra hafa isafidianana isika.
Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fihainoana mozika ankehitriny ny Spotify. Ny tranokala Suède streaming dia misy katalaogim-mozika goavambe misy. Ka tsy ho azonao atao ny tsy mahita zavatra tianao. Miavaka amin'izany indrindra, ankoatra ny fahaizana mamorona playlist antsika manokana, ary amin'izany dia mihaino ny mozikantsika amin'ny fotoana rehetra. Araka ny fantatrao, manana drafitra maimaimpoana izahay, izay handrenesana doka amin'ny fahita matetika, sy ny maody premium izay tsy misy doka ary manome feo avo lenta kokoa ho anay. Ny safidy tsara indrindra amin'ny fihainoana mozika.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity fampiharana ity amin'ny Android TV. Saingy manana drafitra famandrihana roa hisafidianana isika, ary aloa ny maody premium, miaraka amin'ny 9,99 euro isam-bolana.
Sehatra fitetezana atiny iray hafa izay mitombo haingana dia ilay noforonin'i Amazon. Tsikelikely dia efa manana andiany maro hafa izy ireo, amin'ny famokarany manokana, izay notendrena ary efa nahazo mari-pankasitrahana lehibe. Ho fanampin'izay, manana sarimihetsika marobe koa izahay, miaraka amin'ny katalaogna mitombo hatrany. Safidy tsara io satria manana andiana kalitao avo lenta izahay, ary raha manana kaonty Perdana ao amin'ny Amazon ianao dia tsy mila mandoa na inona na inona hahafinaritra anao amin'ity serivisy ity. Tena ahazoana aina izany.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity fampiharana ity amin'ny Android TV. Ao anatiny no ahitantsika ny fividianana, arakaraka ny famandrihana izay hofidintsika sy ny doka.
Ny fananana mpilalao video napetraka ao amin'ny Android TV anao dia soso-kevitra. Satria hanampy antsika amin'ny toe-javatra maro izany. Ny safidiny dia malalaka, saingy ny MX Player dia safidy misongadina ambonin'ny ambiny. Ka azo antoka fa fampiharana tsara dinihina. Izy io dia manana interface mora be ampiasaina, ary miavaka satria rmamoaka endrika sy codec. Ka na inona na inona tiantsika ho hita dia ho afaka manokatra azy ilay mpilalao tsy misy olana. Izany no antony ahazoana aina sy safidy tsara hapetraka amin'ny fahitalavitrao. Antenaina fa hikoriana tsy ho ela izy io, na dia tsy fantatsika hoe rahoviana izany no hitranga.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity fampiharana ity amin'ny Android TV. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay. Tsy doka manelingelina izy ireo, soa ihany.
Fampiharana iray tsy mitovy amin'ny ambiny hitantsika hatreto, fa izany dia mety ho safidy tsara hananana amin'ny fahitalavitra Android-nao. Amin'ity rindranasa ity dia hataonay antoka fa vonona ny hifandray amin'ny Lan amin'ny fotoana rehetra ny solosainantsika. Ankoatry ny fanairana azy hifoha sy hifandray, izay ahafahantsika mampifandray bebe kokoa eo amin'ny solosaintsika sy ny TV Android resahina. Zavatra mety mahasoa amin'ny fidirana amin'ny atiny sasany izay efa notehirizinay tamin'ny solosaina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity fampiharana ity amin'ny Android TV. Ho fanampin'izany, ao anatiny dia tsy manana fividianana na dokam-barotra isan-karazany isika. Izy io dia rindrambaiko izay misy amin'ny teny Espaniôla, noho izany dia tsy hanana olana amin'ny fampiasana azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android TV
Ny fakantsary azo haverina Vivo Nex S dia mandalo fitsapana henjana indrindra an'i JerryRigEverything
OPPO handefa telefaona vaovao 40 any Eropa